Tahriibayaal kale oo laga dhex helay gaari xamuul ah - BBC News Somali
Tahriibayaal kale oo laga dhex helay gaari xamuul ah
Waddo weyn oo Belgium marta (Sawir hore)
Illaa 12 rag ah ayaa laga dhex helay gaari xamuul ah oo qaboojiyayaal ay ku xiran yihiin oo yaallay meel gawaarida la dhigto oo ku taalla gobolka Antwerp ee dalka Belgium, sida ay booliska dalkaas sheegeen.
Booliska waxaa telefoonka ka wacay dareewalkii gaariga oo sheegay in uu ka shakiyay in dad ay ku dhex dhuumanayaan gaarigiisa oo qudaarta qaada.
Waxay ahaayeen 11 qof oo u dhalatay Suuriya iyo hal qof oo u dhashay Sudan. Dhammaantood way badqabaan, waxaana lagu wareejiyay saraakiisha socdaalka.
Isbuucii la soo dhaafay, illaa 39 qof oo mayd ah ayaa laga dhex helay gaari xamuul oo la mid ah midka hadda la qabtay oo yaallay dalka Britain.
Dareewalkii gaariga oo ka soo safray Belgium ayaa lagu oogay dacwad ah in uu laayay.
Waxaa la aaminsan yahay in dadkaas dhintay ay ka soo jeedeen Vietnam ama Shiinaha kuwaa oo ujeedkoodu ahaa in si sharci darro ah ay ku galaan Britain. Weli macadda sida ay u dhinteen oo noqon karta in qabowga uu dilay ama in uu naqaska ku dhagay.
Maxaa ka dhacay Belgium?
Gaariga xamuulka ah wuxuu taagnaa meel weyn oo gawaarida la dhigto oo ku dhinac taalla waddo lagu magacaabo Oud-Turnhout.
Waddadaas wayn waxay isku xirtaa dekadda Zeebrugge illaa Waqooyiga Jarmalka.
Meesha uu ku socday gaarigaas lama shaacin.
Waddamadey ka soo jeedaan Meydadkii laga helay gaarigii UK
Sannad kasta, kumannaan qof oo muhaajiriin sharcidarro ah ayaa isku deya in dalalka Yurub ay galaan iyagoo dhanka bariga ee qaaraddaas ka soo safra. Waxay isku dhex qariyaan gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada.
Gawaarida xamuulka qaada ee qaboojiyayaasha leh waa kuwa ay markasta ku dhex dhuuntaan dadka tahriibaya, sababtoo ah waxaa aad u fudud in looga gudbo baraha koontorool ee qalabka casriga ah ay ku xiran yihiin, sida uu sheegay afhayeen u hadlay laanta gawaarida ee Belgium.
Meydadka siddeed haween ah iyo 31 rag ah ayaa waxaa laga helay gaari xamuul ah oo ku xirnaa qaboojiye.